2017 | Puntland News | 2
WAR DEGDEG AH:- Xaalada amni ee madaxweyne Farmaajo oo qatar weyn ku jirta iyo sarkaal katirsan sirdoonka Dubai oo faafiyay qorshihii lagu qaari jin lahaa madaxweynaha……
Madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa loo baqayaa inuu ammaankiisa halis ku jiro, kadib markii ay soo baxday in wadamo Carbeed ay doonayaan inay shirqool u maleegaan. Tan iyo markii madaxweyne Farmaajo uu dhex dhexaad ka noqday arrimaha Khaliijka, waxaa sii kordhay cadaadiska iyo mucaaradnimada lagu hayo dowladdiisa curdinka ah, iyadoo ujeedada ay […]
Wararkii Ugu Dambeeyey:Maydadka in ka badan 13 ruux oo Soomaali ah oo laga helay qaybo kamid ah Magaalada….
Maydadka 13 ruux oo la rumeysan yahay in ay yihiin Soomali ayaa laga helay tuulo ku taal bartamaha wadanka Mozambique. Sida laga soo xigtey masuuliyin ka tirsan dowlada Mozambique maydadkan ayaa lagu qariyay meel ku dhow Saldhigga Booliska magaalada Cheringoma ee gobolka Sofala Province. Dowlada Mozambique ayaa sheegtay in baaritaan lagu samaynayo balse wax faahfaahin […]
DEG DEG:(DAAWO)Ciidamada Somaliland & Malayshiyaadkii Qoriley oo dulaan ku ah deegaano ka tirsan Puntland & Qorshihii ugu cuslaa oo ka socda Magaalada…..
Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland oo garabsanaya qaar kamid ah Malayshiyaadka kasoo hor jeeda dowladda Puntland ee ka dagaalamaya deegaanka Qoriley ee gobolka Sool ay doonayaan in ay wareegaan deegaano muhiim ah oo ka tirsan Puntland. Deegaanada bartilmaameedkoodu uu yahay ciidamadani ayaa waxaa kamid […]
DEG DEG:Tarsan oo afka furtay dhulkana la galay Xildhibaanada Baarlamaanka & Siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah Dowladda….
Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo ah la-taliyaha dhanka arrimaha siyaasada Madaxweynaha Somalia ayaa si kulul uga hadlay faragalin uu sheegay in Xildhibaanada BFS ku hayaan howlaha Qaranka. Tarzan waxa uu sheegay in Xildhibaanada BFS ay u muuqdaan kuwo aan xaqiiqdii garanaynin shaqooyinka loo igmaday, waxa uuna tilmaamay inay yihiin kuwo u shaqeeya si cagsi ah. […]
DAAWO:Sababta Kenya looga mamnuucay cabista Shiishada & Gabdhaha Soomaalida oo ka hadlay go’aankaasi kadib markii….
Waaa go’aan lama filaan ku noqday dad badan oo Kenyaan ah ee isugu jira kuwa isticmaalo iyo kuwa iibiyo shiishada oo qayb ka ah maandoriyaha kadib markii maanta dowladda Kenya ay soo saartay go’aan dalka ay kaga mamnuuceyso isticmaalka shiishada. Wasaarada Caafimaadka Kenya oo go’aan kani kasoo baxay ayaa sheegtay in shiishada ay halis ku […]
DEG DEG:(Dhagayso)Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay war ka farxiyey dhalinyarada ku jirta Al-shabaab & Maxaa loo sheegay….
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sheegay in mar kale dowladdiisu ay cafis u fidinayso haddii ay isa soo dhiibaan dhalinyarada ku jirta Al-shabaab. Waxa uu sheegay in ay dowladda ka heli doonaan nolol wanaagsan iyo in si wanaagsan loola dhaqmo, isaga oo sidoo kale ku baaqay in ay ka faa’iidaystaan […]
DEG-DEG: Beesha Warsangeli oo caawo Garowe ku qabsanaysa shir muhiim ah kuna dhowaaqaysa war farxad leh iyo madaxweyne Gaas……
DEG-DEG: Beesha Warsangeli oo caawo Garowe ku qabsanaysa shir muhiim ah kuna dhowaaqaysa war farxad leh iyo madaxweyne Gaas…… Dhammaan dhalinyarada iyo waayeelka reer Sanaag iyo Haylaan ee Puntland ee ku sugan Garowe, ayaa lagu war-galiyay in ay kasoo qayb galaan shir looga hadlayo wadada CEEL-CEERIGAABO. Shirkaan ayaa caawo Ka dhici doona Hotel NEW RAYS […]
Askari katirsan maamulka Galmudug oo canshuur aruuriye ah ayaa maanta barqadii suuqa Gaalkacyo ku dilay nin rayid ah oo kasoo jeeda Puntland. Dilka ninkaan shacabka ah ayaa dhalisay xiisad magaalada laga dareemay, xilli magaalada Gaalkacyo laga waday dadaalo nabadeed oo colaada lagusoo afjarayo. Falkaan kadib suuqa magaalada Gaalkacyo ayaa muddo kooban wuxuu hakad, waxaana istaagay […]
Ciyaaryahan Yacquub Cismaan oo kamid ah ciyaartoyda Puntland, ayaaa kabihii uu ku ciyaarayey isla markaana uu ku reebay Gobolka Banaadir waxaa lagu iibiyey carwada Gool Sports ee Garowe ku taal. Eng Qalinle oo kamid ah dhalinyarada ayaa ku iibsaday $200 isagoo dhiirrigelin uga dhigaya laacibkaas uu taageeraha u yahay. Waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya […]
DEG-DEG+SAWIRRO:- Tuuladii Gumburka oo gabi ahaanteedba la gubay, xaaladihii ugu dambeeyay ee colaada koonfurta Sool iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ku dhowaaqay…………… Tuulada Gumburka oo ah halkii uu dhowaan ka qarxay dagaalkii u dhexeeyay beelaha Cumar Maxamuud iyo Bahararsame, ayaa la gubay guryihii carriisyada ahaa ee degaankaas ku yiilay. Dadkii degaanka ku ahaa […]
DEG DEG:(Daawo)Wasiir ka tirsan Somaliland oo Hargeysa kaga dhawaaqay Midnimada Somalia & Muuse Biixi oo dhiigu ku karay….
Wasiir ka tirsan maamulka Somaliland ayaa kaga dhawaaqay gudaha magaalada Hargeysa in Soomaaliya ay tahay dal kaliya isla markaasna aysan macquul ahayn in ay kala go’ do, waxaana uu ka dhawaajiyey in weeraro la isku qaado xiliyada qaarkood.
DEG DEG:Dowladda Farmaajo oo afka ciida loo darayo + C/raxmaan C/shakuur & xubno kale oo looga yeeray Ethiopia si ay dumiyaan…
Dowladda Itoobiya ayaa u yeeratay siyaasiyiin Mucaarad ah oo uu kamid yahay C/raxmaan C/shakuur Warsame oo dhawaan ay dowadda Soomaaliya ku qaatay weerar lagu soo xiray. Ilo xog ogaal ah oo ku dhow C/raxaam C/shakuur ayaa noo sheegay in saddex siyaasi oo Mucaarad ku ah dowadda madaxweyne Farmaajo oo uu kamid yahay C/raxmaan C/shakuur looga […]
Calmadow waa deegaan cilmo ahaan ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya, waxaa ku yaala dhowr tuulo, sidoo kale waa dhul dalxiiska ku wanaagsan waa dhul qabow ah oo dhulka ka sareeya wax badan, tuulooyinka sida Moon oo kale waxaa la sheegay inaysan mudo ku dhow labaatan cisho qoraxda laga arag sababtuna waa cimilida oo […]
Kooxda Xuutiyiinta Shiicada ee Yemen ayaa Labo gantaal kusoo tuuray Soomaaliland sida lagu ogaaday macluumaad aan weli si dhab ah loogu kalsoonayn oo lagasii daayay mid kamid ah talefishinada laga leeyahay dalka Yemen. Labadaan Gantaalka ayaa lagu waramayaa inay ku dhaceen meelo lagu magacaabo, Fiqi Yuusuf iyo War idaad, oo meel ay tahay dhul biyeedka […]
Sirdoonka Ethiopia ayaa Hargeysa iyo Borama ku xidhxidhay qaar ka mid ah Saraakil iyo Askar ka mid ah Sirdoonkisa ka hawlgala magaaloyinkasi sida ay Puntlandnews warka kagga heshay. Wararka aan helnay waxay sheegayaan in dowladda Ethiopia ay xabsiga dhigtay taliyahii Sirdoonka Ethiopia ee Gobolka Awdal, Madaxii Logistics-ka ee Awdal, Xoghaye ku xigeynki Xafiiska Ethiopia ee […]
Jabhadda ONLF ayaa warsaxaafadeed kasoo saartay 170 Shacab Soomaali ah oo ay maleeshiyo Oromo ah ku xasuuqeen dhulka Ismaamulka Oromiya, gaar ahaan Galbeedka Gobolka Hararge. Xasuuqan ayaa wuxuu ka dhacay tuulooyinka kala ah Gadula, Arooreti, Majaare, Balbaleyti, iyo Huluqo. Tuulada Gadula, Booliska Federal ka ayaa 65 qof oo iskugu jira dumar, caruur iyo dad […]
Muqdisho, 28 Disembar, 2017; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daah-furay munaasabad lagu maamusayey dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya. Madaxweynaha oo xarigga ka jaray xarunta iyo qalabka hawada lagu maamulayo ayaa kormeeray shaqada ay hayaan khubarada Soomaaliyeed ee loo xilsaaray maareynta duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri […]
DEG DEG:Madaxweyne C/weli Gaas oo wadnaha farta ku haya & Wasiirka Maaliyada oo Boqolaal Kun oo Dollar ku bixinaya Mooshinkiisa……
Waxaa cirka isku sii shareeraya mooshinka madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas ay kawadaan qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo dhaliilo kala duwan u jeedinaya madaxweyne Gaas, waxaana sidoo kale dhinac socda dadaalo ay wadaan qaar kamid ah gollaha wasiirada Puntland iyo siyaasiyiin ay isku aragti yihiin madaxweynaha. Wasiirka wasaaradda Maaliyada Puntland iyo […]
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilkii ka qaadey Axmed Cali Abuukar oo ahaa Xeer ilaaliye ku xigeenka koowaad ee Qaranka. Lama sheegun Sababaha xilka looga qaadey iyo cida lagu badelay. Laakiin Warqad ka soo baxdey Xafiiska Madaxweynaha ayaa xil ka looga qaadey. Axmed Cali Abuukar ayaa la sheegayaa inuu khilaaf xoogan kala dhexeeyay xeer ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali […]
Taliyaha saldhiga Garoowe Fardafuul Muuse Bille ayaa maanta warbaahinta usoo bandhigay dabagal iyo baaritaan boolisku ku sameeyay kiis fadeexad ah oo ka dhan ah Agaasimaha mashaariicda Madaxtooyadda Puntland Cabdiqani Dhaashane. Taliye Fardafuul ayaa sheegay inay socdaan baaritaano lagu raadinayo shaqsiyaad xadgudub u geystay dhaqanka islaamka iyo sumcadda gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Garowe […]
Maxaa kasoobaxay Kulankii Dhexmaray Weftidii uu horkacayay Garaad Jaamac Garaad Ismail iyo Saraakiisha Ciidamada Ithopia Wafti Balaadhan Uu Hor Kacayay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Oo Maaalmihii Ugu Dambeeyay Kusugnaa Deegaanadii Colaaduhu Ka Dhaceen Kulana Gooni Gooniyana La Qaatay Beelaha Baharsame Iyo Cumar maxamuud ayaa maanta kulan la yeeshay saraakiisha Ethopia ee kusugan deegaanadda Gumburka cagaare […]
DEG-DEG: Daawo: Somaliland oo ku dhowaaqday inay Xabsi dhigayso ciyaartoydii Puntland ee ka qeyb galay tartankii Muqdisho. Maamulka Somaliland oo sheegay in ay ka Go een Soomaaliya inteeda kale ayaa sheegay in ay jiraan Cayaartoy ka soo jeeda maamukaas oo dheeley Cayaarihii Maamul Goboleedyada ee dhawaan lagu qabtay Muqdisho. Somaliland ayaa hanjabaad u jeedisay Cayaartoyda […]
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa Saddexdii qareen ee u doodayey u sheegay inuu kala noqday wakiilnimadii, kadib warqad qoraal ah oo uu u diray. Waxa uu sheegay Shakuur in aysan qareennadaasi matalin, isaga oo sharci darro ku tilmaamay dacwadda loo haysto. Sidoo kale Shakuur ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ku xadgudbay sharciga, […]
DEG DEG:(Daawo)Puntland oo gudaha u gashay Galmudug & Madaxweyne Gaas oo ku dhawaaqay warkii ugu cuslaa kadib markii…..
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo boqolaal ciidan oo ka tirsan Puntland ayaa gudaha u galay goobaha uu ka arimiyo maamulka Galmudug ee koonfurta magaalada Gaalkacyo iyo saldhiga ciidamada isku dhafka ee kasoo kala jeeda labada Puntland iyo Galmudug. Madaxweynaha Puntland ayaa kala hadlay saraakiisha ciidamada sidii loo sugi lahaa amniga loogana hortagi […]
DEG DEG:(Daawo)Madaxweyne caan ah oo ka shaqaynaya kala jarida Somalia & Somaliland oo aqoonsi buuxa la siinayo + “Hadii aad fulisaan heshiiskan aqoonsi bay Somaliland…..
Madaxweyne Cali khaliif Galaydh oo ku fashilmay siyaasada Soomaaliya iyo mida Khaatumo ayaa mar kale kasoo muuqday xaflad ka dhacaday magaalada Hargeysa, isagoona hada Cali khaliif awoodi kaga soo ururtay in uu ka dacwoodo xafladaha ka dhacaya magaalada Hargeysa kagana tiraabo war hala fuliyo heshiiskii aan Caynaba kula galay Somaliland iyadoona maamulka cusub ee muuse […]
DEG DEG:Dagaal culus oo ka qarxi raba deegaanka Qoriley & Cabsidii ugu xooganayd oo ka taagan + Malayshiyaadka Beelaha….
Wararka ka imaanaya deegaanka Qoriley oo dhaca Koonfurta gobolka Sool ayaa sheegaya in cabsidii ugu xooganayd ay ka taagan tahay jiidahaha hore ee deegaanada Magacley, Qoriley, Xoore iyo Gumburka oo uu ka dhacay dagaal xoogani. Deegaanadani oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo malayshiyaad ah oo faro badan ayaa kasoo kala jeeda Beelaha dirirtu u dhaxayso […]
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa xidhiidh dhanka telefoonka kula hadlay qaar kamid ah isimada dhaqanka gobolada Sool sanaag iyo cayn isaga oo kala hadlay sidii loo joojin lahaa colaada koonfurta gobolka sool. Isimada uu xidhiidhka la sameeyay waxaa kamid ah isimada buuhoodle iyo gobolka Sool waxayna ku balan-sanyihiin degaanada koonfurta gobolka sool […]
1. Siciid Cali Yuusuf Gaadayare oo ahaa mas’uulkii maaliyada Puntland ee gobolka Mudug caana ka ahaa magaalada Gaalkacyo waxaa la dilay 31 March 2016 Qarax ismiidaamin ah. 2. Nabadoon Cabdirisaaq Maxamuud Guhaad : Wuxuu kamid ahaa nabadoonadda gobolka mudug si firfircoona uga qayb qaadan jiray howlaha ammnigga gobolka, nabadoon cabdirisaaq guhaad waxaa la dilay bishii […]
Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. Waa magaalo ay tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu ku soo hirto. Waa meel ay tahay in uu si xor ah u degi karo, ka shaqeyn karo, ku noolaan karo, codkiisa ka dhiiban karo isaguna uu iska rashaxi karo. Qofkii isku daya in intaas aan sheegay uu u diido muwaaddin […]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta oo ay tariikhdu tahay 27 December 2017 waxaa si balaadhan koon furta magaalada Gaalkacayo ugu soo dhaweeyay Maamulka Galmudug. Madaxawaynaha iyo Masuuliyiinta ku Wehelinaysay ka qayb galka kulan kaasi is dhex galka bulshada ayaa waxaa kusoo dhaweeyay dhinaca Galmudug […]